I-China i-JKY75 / 65EIII IV-4.0 abavelisi be-Vacuum Extruder kunye nabathengisi | Umenzi weBricmaker
Le modeli izixhobo extruder ikakhulu esetyenziselwa ezahlukeneyo izitena okanye iibhloko extrusion. Kwaye sisizukulwana esitsha sezixhobo ezinobunzima kunye neplastikhi enzima. Zeziphi ezifanelekileyo izinto ezingafunekiyo zenkunkuma yokwakha, amaxhoba, udongwe, umhlaba, udaka, ishale, amalahle, uthuthu, imigulukudu njl.
Lo matshini ubunjwe yi-clutch, i-reducer, i-extrusion ye-shaft ephazamisayo, i-extrusion level, i-extrusion system kunye nokunye. Amanqanaba aphezulu kunye asezantsi acwangciswe ngendlela eyi "T", kwaye inkqubo yokupompa inkunkuma icwangciswe yodwa kwiinjini eziphambili kwaye iqhagamshelwe ngombhobho otywiniweyo. Isinciphisi salo matshini sisebenzisa ibhokisi yegiya ekhethekileyo yomgangatho wezinyo onzima, ophucula kakhulu amandla oqhagamshelwano womphezulu wamazinyo kwaye sandise ubomi benkonzo yebhokisi yebhokisi. Shaft engundoqo isebenzisa isakhiwo shaft edadayo, eyoyisa ukwenzeka intloko jingi ngexesha lokusebenza.
Umgaqo wokusebenza: Inqanaba eliphezulu lesikhuphisi sixhotyiswa ngemoto eyi-160 / 200kW, ukuqhuba i-clutch yomoya, kunye nokuhambisa is-sha-up-shaft shaft ngokusebenzisa isinciphisi esikhethekileyo ukutshintsha isantya ukugqibezela ukuxubana, ukukhupha kunye nokunqunqa udaka; emva koko ingena kwibhokisi ye-vacuum kwaye idlule kwimpompo ye-vacuum, umoya uyatsalelwa kude, kwaye udaka lucinezelwe lucinezelo lodaka ukuya kwi-auger yeqonga elisezantsi. Inqanaba eliphantsi lixhotyiswa yimoto engama-400 / 450kW ukuqhuba i-clutch yomoya, ehanjiswa kwisitovu esiphambili ngesinciphisi somhlaba esinzima, emva koko ityhalelwe kwinqanaba elisezantsi, kwaye iyakhutshelwa kwaye icinezelwe intloko etsobhileyo kunye nemilomo eyi -.
Imveliso yokugqibela Solid / Hollow Brick / Block, Paver izitena
IJKY75 / 65EIII
IJKY75 / 65EIV
I-7000 × 6300 × 3200 I-7000 × 6300 × 3200
Ixesha lokuhanjiswa Iintsuku ezingama-30
Egqithileyo I-JKY80 / 70-4.0 Umshini wokukhupha
Okulandelayo: YASKAWA Robot ingqokelela isitokhwe